eCommerce workshop 18 Jul 09
ဆရာဦးသောင်းတင် -eCommerce enabling environment ရှိလာအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲ?
1) infrastructure2) IT services3) Legal4) Payment (banking)
e-Commerce isamust. ကျွ... Read more
Place : Myanmar Infotech Park, Conference... Read more
ဇွန်လ(၂၇)ရက် စနေနေ့ နံနက်၉နာရီတွင် မန္တလေးမြို့ ဆရာဝန်များအသင်းခန်းမတွင် ဟောပြောပ... Read more
၂၀၀၉ ခုနစ်၊ ဇွန်လ (၃) ရက် မှ (၆) ရက်နေ့ အထိ တရုတ်န... Read more
Monthly Meeting, June 09
(၆ /၂၀၀၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်။ ။ ၆ - ၆ -၂ဝဝ၉ (စနေနေ့)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်။ ။ နံနက် (၉းဝဝ)... Read more
7th ITEE Meeting @ Ulaanbaatar, Mongolia
7th ITEE (Information Technology Engineers Examination) Meeting သို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်တို့ တက်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှ... Read more
eGovernment in Practice Traninging @ Jerusalem
အစ္စရေး e-Government လုပ်ငန်းများ လေ့လာရေး သင်တန်း အသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်
အစ္စရေးနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန Mashav (Center for International Cooperation – Ministry of Foreign Affairs) ၏... Read more
Information Security 2009 Program@Seoul, Korea
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ Korea Agency for Digital Opportunity & Promotion (KADO) မှ ကြီးမှူး၍ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာလုံခြုံရေးများ နှင့် ပတ်သက်သော Information Security 2009 Program ကို... Read more